तपाईको आज विहीवारको राशिफल भन्छ–आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा ! « Sansar News
तपाईको आज विहीवारको राशिफल भन्छ–आज यी ६ राशिकालाई हुनेछ विशेष फाइदा !
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार ०७:२९
साथीभाइ भेटिए पनि वादविवादले सम्बन्ध कमजोर बनाउन सक्छ। तापनि, कामको चापबाट फुर्सद पाइनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार हातलागी हुनेछन्। मनोरञ्जनको समय छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो हुनेछ। यात्राका बीच अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। भोगविलासमा खर्च बढ्नेछ।
२०७८ कार्तिक ४ गते, बिहीवार, (२१ अक्टोबर २०२१)